Sarkaal ka tirsanaa C.I.A-da Mareykanka oo lagu dilay Soomaaliya | Aftahan News
Sarkaal ka tirsanaa C.I.A-da Mareykanka oo lagu dilay Soomaaliya
Muqdisho (Aftahannews)- Faah faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dilka sarkaal ka tirsanaa C.I.A-da Mareykanka oo ku dhintay howlgal ka dhan ahaa Sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo loo maleynayo in uu mas’uul ka ahaa weerar lagu dilay Askari Mareykan ah oo ka dhacay Kenya sanadkii hore.
“Saraakiisheenna oo taageero ka helaya saraakiisha Mareykanka. Waxaan ku duulnay 2: 00 am habeenimo. diyaarado oo askarteena waxay lug ku tageen duurka ka hor inta aanu qarax weyn dhicin oo lagu dilay saaxiibkeen Mareykanka ahaa iyo afar ka mid ah saraakiisha Ciidamada Soomaaliya ayuu yidhi ” Sarkaal ka tirsan sirdoonka Soomaaliya.
Weerarkaas lagu qaaday Gandarshe ayay saraakiishu sheegeen in uu ahaa mid fashilmay” 40 daqiiqo kaddib waxey noqotay in aynu dib u guranno annaga oo aan gaadhin ujeedadeennii”.
Inta u dhaxeysa 650 ilaa 800 oo askari oo Mareykan ah ayaa ka howlgalaya Soomaaliya, sida ku cad tirakoobyadii ugu dambeeyay ee la sameeyay.